World March erutere na Trieste - World March
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » World March erutere na Trieste
03 / 03 / 2020 03 / 03 / 2020 site Antonio Gancedo
Mgbe ọ gafesịrị Koper-Capodistria, na February 26, ụbọchị nke abụọ nke World maka Udo na Ọgba aghara abịarutere Italytali.
Mgbe ọ gafesịrị obodo Koper-Capodistria, na Slovenia, na February 26, ọnwa nke abụọ nke Udo maka Udo na Ọgba aghara abịarute na finallytali.
Mmemme nke ụzọ nke March na mpaghara Trieste belatara nke ukwuu n'ihi iwu enyere n'iwu maka mberede coronavirus: dị ka ọ dị na Umag (Croatia) na Piran (Slovenia) ọ gaghị ekwe omume izute ụmụ akwụkwọ Muggia na Trieste (ya bụ Mụaka 500 nọ na-eche na Aula Magna nke Mahadum Trieste) ma kagbuo ogbako ihu ọha ebe a ga-atụle maka ngbagha ọgwụ nuklia na nhọrọ ụkpụrụ maka udo.
N'isi ututu, Muggia Mayor Laura Marzi natara ndị otu bọọlụ na nzuzo na Muggia Town Hall, mgbe ahụ ndị nnọchianya ahụ kwagara Dolina-San Dorligo della Valle Town Hall ebe natara ya (ọzọ na nzuzo ọzọ Nke Onye Isi Oche, Territory, Urban Plan na Transport Davide Þtokovac. Otu a kwagara na San Giovanni ogige (nke bụbu ụlọ ọgwụ psychiatric, mepere emepe obodo ahụ) ebe, n'ememe onwe onye n'ihu Nagasaki kako, Alessandro Capuzzo, sitere na kọmịkọ nhazi mpaghara ahụ, chetara ọnụ ọgụgụ nke onye isi mgbaka ahụ na-adịghị eme ihe ike Franco Basaglia. Site na nkwado nke onye ntụgharị okwu Ada Scrignari.
Ndị ọzọ bịaranụ bụ Roberto Mezzina, onye bụbu onye ntụzi nke Ngalaba Ahụike Uche nke Trieste na ndị omee abụọ Pavel Berdon na Giordano Vascotto nke "Accademia della Follia".
Nke abụọ, ọkachasị, kọrọ banyere ahụmịhe ya mgbe ọ hụrụ na ọ kpọchiri akpọchi n'ụlọ ọgwụ psychi, tupu mmezigharị Basaglia, mgbanwe nke nyere ya ohere ị bie ndụ dị mma wee chọta ọrụ na mpụga ụlọ ọgwụ ochie. Ndị nnọchite anya ahụ kwagara n'etiti Trieste ịga leta "ebe ncheta" ebe enwere ebe ncheta ndị mmadụ n'otu n'otu na-echeta ihe ọjọọ nke ndị Nazi-fascist mere na Piazza Oberdan ncheta ncheta nke ogbugbu mmadụ abụọ "gburu-gburu" nwoke. site n'aka ndị Nazi.
N'ọtụtụ ebe "ndị na-ere ahịa" hapụrụ okpu na bouquets nke ifuru. Endedbọchị ahụ gwụsịrị na nzukọ ya na ndị enyi Trieste sitere na 2nd World March ebe onye na-akwalite March, Rafael de la Rubia, kerịrị ahụmịhe nke mba ndị ọ gara.
Na mmechi, “Danilo Dolci Kọmitii maka udo, ịdị n'otu na ịdị n'otu” chọrọ ịkwụ ụgwọ maka ndị ngagharị iwe ise ahụ nwere ọkọlọtọ udo nke Italiantali na Slovenian tupu ịhapụ ọkwa ọzọ: Fiumicello-Villa Vicentina, obodo 5 km site na Trieste.